निखिलले सात तलाबाट हाम फालेको त्यो क्षण… – MB Khabar
बुधबार, अशोज ६, २०७८
तारकेश्वोर प्याब्सन अध्यक्षमा पुन निर्बिरोध चयन
अब युट्युबको कमेन्टको भाषा अनुवाद गर्न सकिने
कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुँदै करिश्मा
फतिमा एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क छिन्
गायनसङै अभिनयमा सक्रिय हुँदै स्नेहा
१८ वर्षीया एम्मा राडुकानुलाई यूएस ओपन टेनिसको उपाधी
युएस ओपन जितेर बेलायती किशोरीले नयाँ किर्तिमान
गाउँगाउँ बङ्गुरपालनको व्यावसायिक प्रशिक्षण
युट्युबबाट हुने कमाइमा अग्रिम कर लाग्ने
‘जातको प्रश्न’ को दोस्रो सिजन शुभारम्भ
राजनीति मनाेरञ्जन अर्थ खबर सूचना प्रबिधि भिडियो अन्तराष्ट्रिय राजनीति खेलकुद
निखिलले सात तलाबाट हाम फालेको त्यो क्षण…
MB Khabar १० भाद्र २०७६, मंगलवार
सानो उमेरदेखि नै निखिल उप्रेतीलाई चलचित्रको पर्दामा देखिने रहर थियो । चलचित्रलाई विशेष चासो दिने निखिल हलसम्म पुगिरहेका हुन्थे । चलचित्र हेरेदेखि नै ज्याकी चेन र बुरुस्लीका फ्यान थिए, निखिल । उनीहरुको स्टन्ट अनि एक्सन एकदमै रुचाउथे ।
गोजीभरी दुई सेलिब्रिटीका पोस्टरहरु बोकेर हिड्थे । निखिलसँग भएका दुई तस्वीरमा ज्याकीले लौरो घुमाएका थिए । निखिललाई त्यो काम गर्न मन लाग्यो । सोही तस्वीर हेरेर नै उनले लौरो घुमाउन सिके । निखिल सम्झिन्छन्–‘मैले लौरो घुमाउनका लागि एउटा काठ तयार पारेँ । त्यसलाई तासेर सानो बनाएँ । र घुमाउन सिके ।’ निखिललाई धेरै सिक्नु थियो, अनि ज्याकी बुरुस्ली जस्तै बन्नु थियो । उनी मार्शल आर्ट सिक्न थाले । मार्शल आर्ट सिक्दै गर्दा धेरै मिहिनेत गर्थे उनी । उनलाई मार्शल आर्ट मात्र सिकेर चित्त वुझाएनन् । उनले उसु खेल्न सुरु गरे । उसु पनि उनी निकै मिहिनेत गरेर सिक्थे । जिम्न्याष्टिक पनि एकदमै राम्रो गर्थे, निखिल । निखिलको यो क्रियाकलाप देखेपछि धेरैले उनलाई हिरो बन्न सुझाउथे । आखिर निखिलको चाहना पनि यही नै थियो । घरमा कुरा गरे, अनि पढ्नका लागि मुम्बई हानिए । मुम्बई पुगेर निखिलले चलचित्र निर्देशन पढ्न थाले । त्यहाँ पुगेर केही चलचित्रमा सहायक निर्देशकको काम गर्ने अवसर पाएको निखिल बताउँछन् । निखिल भन्छन्–‘मैले धेरै चलचित्रमा सहायक निर्देशक बनेर काम गरेको छु ।’
हिन्दी चलचित्रमा नायकको डुप्लिकेट बनेर पनि काम गर्न भ्याएका छन्, निखिलले । ‘नायकको डुप्लिकेट बनेर पनि धेरै चलचित्रमा फाइटका स्टन्टहरु गरियो’, निखिलको भनाई छ । मुम्बईमा रहँदा निखिलको कामलाई निर्माता तथा कलाकार पवन मैनालीले देखेका थिए । निखिलको काम अनि उनको शारीरिक बनावटबाट प्रभावित भए, पवन । त्यसैबेला पवन नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा थिए । हिरोको खोजी भइरहेको थियो । पवनले आफूले एक्सन चलचित्र बनाउन लागेको भन्दै निखिललाई अफर गरे । निखिलको चाहना पनि सोही नै थियो । यसैले पनि उनले आँखा चिम्लिएर प्रस्ताव स्विकार गरे ।निखिलमा नयाँ जोश थियो । चलचित्र पाएको खुसी थियो । निखिल भन्छन्, ‘चलचित्र पाएको खुसीमा म जे नि गर्न तयार थिएँ ।’ नभन्दै चलचित्रको स्कृप्टमा नै निखिलले सात तलाबाट हामफाल्नु पर्ने थियो । उक्त कुरालाई निखिलले सामान्य रुपमा लिए । उनी सम्झिन्छन्, ‘सात तलाबाट हामफाल्ने कुरामा मलाई अलिकति पनि डर थिएन । यस कुराले त मलाई उत्साहित बनाइरहेको थियो ।’
अन्ततः निखिलले सात तलाबाट हामफाले नै । कान्तिपूर पब्लिकेशनको भवनबाट निखिलले हाम फालेका थिए । यो कुराको चर्चा चलचित्र नगरीमा राम्रै भयो । दिन दुई गुना रात चौगुना भनेजस्तो निखिलको हाइप बढ्दै गयो । पत्रपत्रिकामा पनि निखिलको समचारहरु धेरै आए । सात तलाबाट हाम फालेको कुराले आफूलाई धेरै चिनाएको निखिलको बुझाई छ । ‘मैले सात तलाबाट हाम के फालेको थिए, मेरो चर्चा त यति धेरै भयो कि त्यसपछि त चलचित्र क्षेत्रमा फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था नै आएन’, निखिल भन्छन्, ‘त्यही चर्चाले अहिलेसम्म चलचित्र गरिरहेको छु ।’ अनलाइनखबर
सोनि कडेलको लखनऊ देखि काठमाडौ सम्मको कला यात्रा
‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट’ अवार्ड मात्र लिन्छु –राजेश पायल राई
९ मंसिर २०७६, सोमबार
‘मलाई चुनौती रोज्न मनपर्छ’ -नायक अनमोल केसी
४ कार्तिक २०७६, सोमबार
यूएईमा उर्गेनले ३ बर्षअघि लेखेका थिए ‘टाढा भएपनि’
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार
२८ भाद्र २०७८, सोमबार
४ आश्विन २०७८, सोमबार
३० भाद्र २०७८, बुधबार
स्वस्तिमा अमेरिकन चलचित्रमा काम गर्दै
२४ बैशाख २०७७, बुधबार
युट्युबमा सञ्चारमाध्यमको सिद्धान्तविपरीतका सामग्री प्रसारण गर्नेलाई कारवाही
श्रीराज कलेक्सनको ब्राण्ड एम्बेसडरमा विश्व उल्टो मोटरसाइकल यात्री कार्की
१० असार २०७८, बिहीबार
‘लप्पन छप्पन २’ दयाहाङले छोडे
२ मंसिर २०७६, सोमबार
एम बि खबर डट कम
हरिसिद्धि २८ ललितपुर
सूचना विभाग दर्ता नं: १४७७/०७६-७७
प्रकाशन सुरु: २०७६ असार १४
प्रकाशक : एम.बि. मिडिया प्रा.लि.
संचालक : मकलसिं राई
सम्पादक : भविन्द्र राई
सम्वाददाता : राजकुमार सुब्बा
डिजाईनर : संजय बर्मा
© Copyright 2021, MB Media (P) Ltd., All Rights Reserved | Universal IT